क्वारेन्टाइन लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएका वृद्धको कोरोना परिक्षण, आयो यस्तो रिपोर्ट — Sanchar Kendra
१फेरी बढ्यो नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या, आज एकैदिन यति धेरैको मृत्यु
२आज पनि नेपालमा यति धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
३ओली-प्रचण्डबीच फेरी पानी बारबार, केन्द्रीय कमिटी बैठक र महाधिवेशन अनिश्‍चित
४कोरोना संक्रमणका कारण पत्रकार गोपाल सिवाको निधन
५नबिल बैंक एडीबीको ‘नेपालमा अग्रणी पार्टनर बैंक’ अवार्डबाट सम्मानित
६फेरि १ महिना देशव्यापी लकडाउनको घोषणा, यी क्षेत्रहरुमा लाग्ने छैन प्रतिबन्ध
७विश्वभर एकैदिन ५ लाखभन्दा बढीमा संक्रमण, ७ हजार बढीको मृत्यु
८नेपालमा फेरी कोरोना संक्रमण अझै बढ्ने विज्ञहरू चेतावनी, के हाे कारण ?
९भारतमा ५१ नेपाली विद्यार्थी निर्घात कु’टिए, शिक्षकहरुलाई समेत मोबाइल खोसेर बन्धक बनाइयाे
१०डोटीमा घ’ट्यो यस्तो दुखद घ’टना, एकै परिवारका २ जनाको मृत्यु
११भोलिबाट दैनिक कोभिड–१९ प्रेस ब्रिफिङ नहुने, यस्ताे छ कारण
क्वारेन्टाइन लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएका वृद्धको कोरोना परिक्षण, आयो यस्तो रिपोर्ट
काठमाडौँ । क्वारेन्टाइनमा लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएका बैतडीको पुर्चौडीका ६७ वर्षीय वृद्धको कोरोना परिक्षण रिपोर्ट आएको छ । ६७ वर्षीयजुने लुहारको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । उनको शनिबार पुर्चौडी नगरपालिका–६ को क्वारेन्टाइनमा लैजाँदै गर्दा खडायत गाउँ नजिकैको बाटोमा मृत्यु भएको थियो।
स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी पठाइएकोमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए।
भारतीय सीमानाका झुलाघाटबाट उद्धार गरेर ल्याइएका जुनेको शनिबार मृत्यु भएको थियो। लुहार यही वैशाख १८ गते भारतको पिथौरागढबाट झुलाघाट नाका हुँदै नेपाल आएका थिए।एक महिनाअघि उपचारका लागि भारतको पिथौरागढ पुगेका लुहार लकडाउनका कारण पिथौरागढमै बसेका थिए।
मृतकको शवलाई प्लाष्टिक बेरेर सुरक्षात्मक तरिकाले दाहसंस्कार गरिसकिएको पुर्चौंडी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोदकुमार कुंवरले जानकारी दिए।
यस्तै बाँकेको नेपालगञ्जमा थप सात जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुको संख्या ८२ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ सातै जना संक्रमित बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ का हुन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिर कुमार अधिकारीका अनुसार चार जना महिला र तीन जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
मंगलबार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा ९, ३२, ३४ र ५५ वर्षका महिला तथा २२, ३० र ४० वर्षका पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरु सबैको स्वास्थ्य सामान्य छ ।
यसअघि आइतबार बाँकेमा एकैदिन १५ जना संक्रमित फेला परेका थिए । संक्रमितको संख्या बढेपछि नेपालगञ्जमा २५ गतेसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश थापाका अनुसार बाँकेमा हालसम्म ५ सय ९३ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ । बाँकेमा पीसीआर विधिबाट ३ सय ५८ को जाँचका लागि स्वाब संकलन गरिएकोमा छ ।
सोमबारसम्म ३९ को रिपोर्ट आउन बाँकी थियो । नेपालगन्जका कोरोना संक्रमित अनपेक्षित देखिएपछि ट्रयाकिङ्गका लागि बुटवल र काठमाडौंबाट पनि टोली पुगेको छ । नेपालगन्जमा भेटिएका संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग र स्वाब संकलन मंगलबारबाट शुरु हुने भएको छ ।
बाँकेसँग सिमाना जोडिएको कर्णाली प्रदेशले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सबै नाका बन्द गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको छ । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको म्याद यही वैशाख २५ गतेसम्म छ ।